Tababaraha Man United Solskjaer kuma laaban karo Gurigiisa waxaana Sabab u ah daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk….(Ogoow sida ay wax u jiraan) – Gool FM
Tababaraha Man United Solskjaer kuma laaban karo Gurigiisa waxaana Sabab u ah daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk….(Ogoow sida ay wax u jiraan)
(Manchester) 05 Maarso 2019. Tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa baadi goob ugu jira guri uu dego maadaama uu ka soo guuray Lowry Hotel isla markaana lagu wado inuu noqdo tababaraha Rasmiga ah ee Red Devils.
Yeelkeede, macalinka reer Norway kuma soo laaban karo gurigiisa waayo wuxuu u kireysan yahay daafaca birta ah ee Liverpool Virgil van Dijk.
Inkastuu Solskjaer uu leeyahay milkiyada guri ka kooban shan qol oo jiif ah oo ku yaala Cheshire ayuu misane u baahan yahay inuu helo guri uu si ku meel gaar ah ugu sii noolaado maadaama uu gurigiisa u kireysan yahay daafaca reer Holland isla markaana uusan goor dhow ka baxeen.
Solskjaer kaa oo guul gaaray 13 ka mid ah 16-kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada tan iyo sidii uu ula wareegay xilka Old Trafford ayaa ku noolaa gurigan ku kacaya 4 milyan oo bound berigii uu ciyaaryahanka ahaa.
46-jirka ayaa gurigiisa suuqa dhigay dhowr sano ka hor, balse Van Dijk oo ka soo guuray Southampton ayaa jeclaaday oona kireystay guriga kaddib markii la waayay wax iibsada.
Sikastaba, Solskjaer ayaa iminka ku qasbanaan doona inuu raadsado guri uu si ku meel gaar ah u sii dego maadaama la sheegay in Virgil van Dijk uusan goor dhow ka baxeyn guriga uu kirada ku degan yahay.